I-nitrojeni / i-Azote Facts - Itheyibhile yePeriodic Ele Elements
I-nitrojeni okanye i-Azote Facts
I-nitrogen Chemical & Properties Properties zeNitrogen
I-nitrojeni (iAzote) yinto ebalulekileyo engabonakaliyo kunye negesi eninzi kakhulu emhlabeni. Nazi izinto malunga nale nxalenye:
Initrogen Inomic Number: 7
I-nitrogen Uphawu: N (Az, isiFrentshi)
I-nitrogen Atomic Isisindo : 14.00674
Ukufumana iNitrogen: UDaniel Rutherford 1772 (eScotland): URutherford wasusa i-oksijini kunye necarbon dioxide evela emoyeni waza wabonisa ukuba i-gas residual ayiyi kuxhasa ukutsha okanye izinto eziphilayo.
Uqwalaselo lwe-Electron : [Yena] 2s 2 2p 3
Igama elivela kuyo: isiLatini: i- nitrum , isiGrike: i- nitron kunye namajethi ; soda yesidalwa, ukwakha. I-nitrogen ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba 'ngotshiso' okanye 'umoya okhohlakeleyo'. I-chemist French u-Antoine Laurent Lavoisier ogama lingu-nitrogen nitrogen, okuthetha ngaphandle kokuphila.
Iipropati: I- nitrojeni yegesi ayinakubalabala, ayinasiphelo, kwaye inengxaki. I-nitrojeni yotywala ayinakubala kunye ne-odorless, kwaye iyafana nokubonakala kwamanzi. Kukho iifom ezimbini ze-nitrogen eziqinileyo, kunye no-b, kunye noguquko phakathi kweefom ezimbini kwi-237 ° C. I-nitrogen ye- melt point point -209.86 ° C, indawo yokubilisa yi -195.8 ° C, ubuninzi be-1.2506 g / l, ubunzima buninzi ngu-0.0808 (-195.8 ° C) kumanzi kunye no-1.026 (-252 ° C) ukuze uqine. I-nitrogen ine-valence ye-3 okanye ye-5.
Ukusetyenziswa: Iifomitrojeni zifumaneka kwiindawo zokutya, izichumisi, iityhefu kunye neziqhumane. Igesi ye-nitrojeni isetyenziswe njengendlela yokugcoba ngexesha lokuveliswa kwezinto zombane.
I-nitrojeni isetyenzisiwe ekuthineni ii- steels ezingenasici kunye nezinye iimveliso zensimbi. I-nitrojeni yotywala isetyenziswa njengefriji. Nangona igesi ye-nitrojeni isingenisekile, i-bacteria yomhlaba ingakwazi 'ukulungisa' i-nitrogeni ibe yindlela esetyenziswayo, ezo izityalo kunye nezilwanyana ezinokuzisebenzisa. I-nitrojeni iyinxalenye yazo zonke iiprotheni. I-nitrojeni inoxanduva lobomvu obomvu, ohlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka-violet, kunye nemibala ephilileyo ye-aurora.
Imithombo: I- nitrojesi yegesi (N 2 ) yenza i-78.1% yomsindo womhlaba. Igesi ye-nitrojeni itholakala ngokukhathala kunye ne- fractional distillation evela emoyeni. I-nitrojesi yegesi nayo iyakulungiswa ngokushushumbisa isisombululo samanzi se-nitrite (NH 4 NO 3 ). I-nitrojeni itholakala kuzo zonke izinto eziphilayo. I-Ammonia (NH 3 ), iqela elibalulekileyo le-nitrojeni yezorhwebo, ngokuqhelekileyo liyinxalenye yokuqala yezinye iindidi ezininzi ze-nitrogen. I-Ammonia inokuveliswa ngokusebenzisa inkqubo yeHaber.
Uhlobo lweElement: Non-Metal
Ubuninzi (g / cc): 0.808 (@ -195 ° C)
I-Isotopes: Kukho i-isotop eyaziwayo ye-nitrogen evela kwi-N-10 ukuya kwi-N-25. Kukho i-isotop ezinzileyo: N-14 kunye ne-N-15. I-N-14 yi-isotope eqhelekileyo i-99.6% yendalo ye-nitrogen.
Imbonakalo: engenakubalabala, engenasiphelo, engenakunambitha, kunye ne-gas inert
I-Atomic Radius (ntambama): 92
Umthamo we-Atomic (cc / mol): 17.3
I-Covalent Radius (ntambama): 75
I-Radiyo ye-Ionic : 13 (+ 5e) 171 (-3e)
Ukushisa okucacileyo (@ 20 ° CJ / g mol): 1.042 (NN)
Inombolo ye-Pauling Negativity: 3.04
I-Energy First Ionisation (kJ / mol): 1401.5
Amazwe okuxhoma : 5, 4, 3, 2, -3
Ukwakhiwa kwamathambo : i- hexagonal
I-Lattice Constant (Å): 4.039
I-Lattice C / A Isilinganiselo: 1.651
UkuLawula iMagnetic: idayimane
Ukuqhuba ukushisa (300 K): 25.83 m W · m-1 · K-1
Isantya sesandi (igesi, 27 ° C): 353 m / s
Inani leRejista ye- CAS : 7727-37-9
Iingxelo: ILebhu yeSizwe yaseLos Alamos (2001), i-Crescent Chemical Company (2001), i-Lange's Handbook yeKhemistry (1952) I-International Atomic Energy Agency ISSDF (ngo-2010)
Buyela kwiThebula lePeriodic Elements
I-10 ye-Chromium Facts
Oganesson Facts - Element 118 okanye Og
Iphephadonga lePeriodic Table yamahhala
Zingaphi Izinto Ezingenziwa Ngokwemvelo?
I-Astatine Facts - Element 85 okanye Ar
Itheyibhile yexesha eliPhezulu leMpahla - Iimpawu zokuxhoma
Iinkcukacha zeDarmstadtium - Element 110 okanye iDs
Iingxelo zePeriodic Periodic - Upapasho luka-2015
Ukuzivocavoca ekuKhankeni iNgcaciso yeNgaphambili
Ukuhlolwa kweMat Maths
Yintoni Oyenzayo Abadlali?
Yintoni i-LDS Mission?
Inkqubo yeNdlela yeChaco - kwiNdlela yamandulo yaseMerika yaseMerika
I-Warren Wilson Ikholeji ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
'Ibali elifutshane' uMtyholi noMat Walker
"Com'è bello" Iingoma kunye neNguqulelo
Izifo zonyango lwe-Homeopathic for Headaches
Iivili ze-Hub-Centric vs. Lug-Centric Wheels
Ziyiphi iindlwana ezithintekayo kwiiNgesi zesiGrike?
6 Ii-Butterflies Unokuzifumana Ngobusika
I-Latin Personal Pronouns: I-Declension Table
KwiYunivesithi yase-Idaho Admissions
I-Sundogs: Imvula yamanzi Ngaphandle kwelanga
I-Agnosticism eqinile nxamnye ne-Agnosticism enamandla: Yintoni eyahlukileyo?
Imizekelo yeziGaba eziPhambili
7 Classic Fantasy IiKhathuthi
I-Fake Neon Sign